Ny Kanada dia firenena any Amerika Avaratra. Any avaratr' i Etazonia no misy azy.
Hitan' i Jacques Cartier tamin' ny taona 1534 ny morontsiraka atsinanan'i Kanada, ary ny faritanin' i Quebec manodidina ny renirano Saint-Laurent no lasa zanatany frantsain' ny Tontolo Vaovao. Teo moron' io renirano io no natsanganan' i Samuel Champlain ny tanànan' i Québec tamin' ny taona 1608.
Ny tompontany taloha no nipetraka teo, ary nanana fifandraisana diplômatika tsaratsara ny Frantsay tamin' izy ireo. Nitondra mpijirika (colons) 69 000 ny Frantsay tany Amerika Avaratra nanomboka tamin' ny nahatongavan' i Jacques Cartier hatramin' ny 1763.
Nony taty aoriana dia lasan' ny Britanika noho ny fandreseny ny Frantsay ny faritra avaratr' i Nouvelle-France. Vitsy ny mponina anglisy tao Kanada tamin' izany fotoana izany, ary nanomboka tonga kelikely taorian' ny fahaleovantenan' i Etazonia ny ankamaroan' ny mpanjanatany britanika izay nandositra noho ny tolom-piavotana amerikana.
Tamin' ny taona 1867, voaforon' ny Britanika ny Dominion-n' i Kanada, teraka avy amin' ny fivondronan' ny zanatany britanika telo: i Kanada navondrona, i New-Brunswick ary i Nouvelle-Écosse.
Ny "Acte de l'Amérique du Nord britannique", lalàna britanika natao tamin' ny taona 1867 dia naverina tany Angletera tamin' ny taona 1980 mba hanomezana lalam-panorenana an' i Kanada. Ankehitriny dia firenena manana faritany mizaka tena i Kanada ary manana faritany folo ary tany telo. Ireo faritany folo sy tany telo ireo dia samy manana ny praiminisiny sy ny governemantany ary ny antenimierany.
Nahazo ny fahaleovantenany avy amin' ny Fanjakana Mitambatra i Kanada, ary tsy nisy ady natao ho an' io fahaleovantena io. Anefa dia tsy ohatra ny zanatany anglisy nahaleotena taty aoriana ny fomba nahaleovan' i Kanada tena: azony tsikelikely ny fahaleovantenany nanomboka tamin' ny taona 1867 hatramin' ny taona 1982.
Ankehitriny, i Kanada dia fanjakana manao ny mpanjakan' i Angletera ho mpanjaka. Ny tena fahefana kosa anefa dia eo am-pelantanan' ny governera jeneraly sy ny praiminisitra kanadianina izay fidian' ny vahoaka.
Mitonon-tena fa firenena miteny fiteny roa sy manan-kolotsaina maro samihafa i Kanada. Samy teny ôfisialy sy tenim-pirenena ny fiteny frantsay sy ny fiteny anglisy. I Quebec irery no faritany be mpiteny frantsay, ary izy irery no faritany tsy manao ny fiteny anglisy ho fiteny ôfisialy. Miteny anglisy daholo ny ankabeazan' ny faritany rehetra. Tany Kanada tamin' ny 2006 dia 9,6 tapitrisa ny mpiteny frantsay (30,7 %) ary 26,6 tapitrisa ny mpiteny anglisy (85 %).
Firenena ao Amerika: Antigoa sy Barboda - Arjentina - Bahamasy - Barbady - Belizy - Bôlivia - Brezila - Dôminika - Ekoadôra - Etazonia - Goatemala - Goiana - Grenady - Haity -Hôndorasy - Jamaîka - Kanada - Kioba - Kôlômbia - Kôsta Rika - Meksika - Nikaragoa - Orogoay - Panama - Paragoay - Però - Pôrtô Rikô - Repoblika Dôminikana - Salvadôro - Santa Losia - Santa Kity sy Nevisy - Santa-Vinsanta-sy-Grenadina - Silia - Sorinama - Trinite sy Tôbagô -Venezoela
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanada&oldid=1041142"
Voaova farany tamin'ny 6 Desambra 2021 amin'ny 11:03 ity pejy ity.